Toy to link to AutoCAD oo leh ArcGIS - Geofumadas
Nofeembar, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk
Aynu cadeyno nooca AutoCAD
Ma tixraaci karno Mashruuca AutoCAD ama Civil3D, kaas oo ku xiran adeegyadda OGC laakiin si fudud oo loo yaqaan 'AutoCAD 2007', taas oo ah, sababtoo ah waxay leeyihiin shaqeysi jahwareer.
Aynu cadeyno arinkaas ArcGIS:
Ma ku xirnaato Geodatabase ama mxd-ka gudaha lagu kaydiyo
Laba adeeg oo aan la abuurin iyada oo la adeegsanayo ArcIMS dhaqameed (ma dhahayo)
Hase yeeshee, adeegga loo abuuray adoo adeegsanaya ArcGIS Server, waxay noqon kartaa marti-haaga, intranet-ka ama internetka.
Aynu cadeyno nooca ciyaarta
Waa qalab bilaash ah oo ay sameeyeen ESRI loo yaqaan"ArcGIS for AutoCAD" kaas oo la soo dejiyey, la rakibay kaas oo u ogolaanaya in laga bilaabo AutoCAD waxaad wici kartaa adeegga xogta ay bixiso ArcGIS Server.
Waxay u baahan tahay muujinta URL ee adeegga, iyo nooca caymiska si loo soo dejiyo. Kadibna waxay ku kaydisaa Mashruuca Layer waxaana loola dhaqmi karaa sida lakabka.
Waxa kale oo ay ixtiraameysaa calaamadaha iyo sifooyinka maaddaama lagu rinjiyeynayo ArcGIS waxaadna kaala tashan kartaa xogta miisaska la xiriira.
Waxaan u maleyneynaa in ay tahay dadaal wanaagsan oo lagu hormarinayo wada shaqeynta qalabka caamka ah ee caamka ah, sababtoo ah waqtigan mara mar hore ayaa loo fahmay in waxyaabaha kale ee la dhoofiyo iyo dibedda laga keeno ay tahay in la tirtiro; inkastoo ay lagama maarmaan tahay in la arko waxa ay isticmaalayaan iyo haddii ay hoos u dhigaan si ay ula xiriiraan ArcSDE si geodatabase ah.
Halkan waxaad ka heli kartaa soo qaado
Halkaan waxaad ka arki kartaa fiidiyowga wax lagu ciyaaro ee ficilka.
Map-ka AutoCAD ESRI
Post Previous«Previous Yaa doonaya inuu ku guuleysto Nokia
Post Next Gmail wuxuu isku xiraa Audio-Video-chatNext »
4 Waxay u jawaabaan "Toy to Connect AutoCAD with ArcGIS"
Berta isagu wuxuu leeyahay:
Hada, waan soo dejiyey codsigayga, waanan isdheereynayaa, wax fikrad ah kama qabo GIS sidaas darteed waxaan u baahanahay caawimo.
Tusaale ahaan waxaan rabaa in aan ku xiro, taas oo horeba khariidad ma aha server maadaama aan samayn karo?
Waa inay ahaadaan urls u adeega macluumaadka hoos yimaada heerka OGC iyada oo la adeegsanayo ArcGIS Server.
Dalkaaga, waa inaad baaris ku samaysaa adeegyada laga heli karo.
Waxaan u maleynayaa in bogga ESRI waxaa jira liisyo ku saabsan adeegyada la heli karo.
qurux badan isagu wuxuu leeyahay:
hello, waxaan ku rakibay ArcGIS for AutoCAD mashiinkayga iyo waxaan ku helayaa qalad ah InvalidURI: URI waa madhan.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aan ku lifaaqi karo oo kaliya faylasha internetka iyo sida aan u sameeyo ama bogga ay ku habboon yihiin.